बिहे हुन ८ दिन अगाडी दुलाहाले किन गरे आत्महत्या ? | NepalDut
बिहे हुन ८ दिन अगाडी दुलाहाले किन गरे आत्महत्या ?
महोत्तरी जिल्लाको भङ्गहा नगरपालिका–७, मेघनाथ गोरहन्ना गाउँमा विवाह हुनु ८ दिन अगाडी एक जना युवाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आउँदो जेठ १५ गते विवाह हुन लागेका भङ्गहा नपा–७ बस्ने जयनारायण महराका छोरा २२ वर्षीय सुवोधकुमार महराले आत्महत्या गरेका हुन्। उनको शव घरभन्दा ५ सय मिटर परको जङ्गलमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको हो।
यही जेठ १५ गते छिमेकी गाउँ औरही नगरपालिका–७ मा जन्ती जाने तय भएता पनि महराको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले बताए । घरायसी तनावका कारण युवकले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।